जान्नुहोस् स’ह’बा’स ग’र्दा कहिल्यै गर्न नहुने यी ५ कुरा - सिधा मिडिया
१ बैशाख २०७९, बिहीबार १८:४९ मा प्रकाशित
234 जनाले पढ़िसके
जब तपाई आफ्नो प्रेमीसँग ओछ्यानमा हुनुहुन्छ । तपाईले गर्न चाहनुभएको अन्तिम कुरा के हुन् ? पहिले परिकल्पना गर्नुहोस् अनि मात्र यो लेख पढ्नुहोस् । राम्रो महसुस गर्नेगरी स’हबा’स कसरी गर्ने भन्ने बारे सबैको दिमागमा स्पष्ट हुँदैन। त्यसले हामी यहाँ केहि सामान्य गल्तीहरू छन् जुन तपाईंले गर्नु हुँदैन भनेर उल्लेख गर्दै छौ । जुन धेरै चाहेका हुन्छन् ।
१, चु’म्बन ग’र्ने भुल्नु
विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस् धेरै मानिसहरू तिनीहरूले स’हबा’स ग’र्दा आफ्नो पार्टनरलाई चु’म्बन गर्दैनन् । किन ? हुनसक्छ स्थितिले यसको लागि अनुमति दिँदैन वा तिनीहरू क्लाइम्याक्स गर्न धेरै उत्सुक छन् । जे होस्, यो अत्याधिक सिफारिस गरिएको कुरा हो । चु’म्बन ग’र्न भुल्नुभयो भने तपाईले केही कमि गर्नुभएको छ ।
२, आफ्नो पार्टनर तयार हुनुभन्दा पहिले नै आतिने
धेरै मानिसहरूले आ’क्रा’मक साझेदारको आनन्द लिन हतार गर्छन् । तिनीहरूको शरीरको कुनै पनि भागलाई उ’त्ते’जित हु’नु अघि नै यस्तो गर्नु राम्रो होइन । यसले पार्टनर डराउन सक्छ। त्यसैले आफ्नो पार्टनरको कान, काँध, घाँटी वा शरीरको अन्य कुनै भागमा टोक्नु अघि उहाँ पूर्णतया उत्साहित छ की छैन भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। त्यसपछि मात्र यस्ता क्रियाकलापमा भाग लिनुहोला ।
३, सबै कुरा बेवास्ता गर्दै स’हबा’स कार्यमा भाग लिनु
त्यस्तै शरीरका अनेकौँ भाग संवेदनशील छन् । अति सुकोमल छन् । तर तपाईले निश्चित रूपमा आफ्नो प्रेमीको शरीरका अन्य भागहरूमा ध्यान दिनुहुन्न । मात्र त्यस अंगमा मात्रै फोकस गरेर क्रिया गर्नुहुन्छ भने तपाई गलत हुनुहुन्छ । पार्टनरका सम्पूर्ण शरीरमा केही समय ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । घुँडा, नाडी, ढाड र पेट पुरुषहरूका साथै महिलाहरूका लागि अत्यधिक उ’त्ते’जित क्षेत्रहरू हुन् । यी क्षेत्रहरूलाई बिस्तारै स्याहार गर्नाले तपाईंको पार्टनरलाई अझ उ’त्ते’जित ग र्न मद्दत गर्नेछ । बदलामा तिनीहरूले तपाईलाई फिर्ता अत्याधिक खुशी दिनेछन् ।
४, आफ्नो वजन आफ्नो पार्टनरमा राख्दै
केटी नै भए पनि हरेक पलमा आफैलाई हराउन र आफ्नो प्रेमीमा पागल हुनु तयार हुन्छन् । तर जब तपाई तिनीहरूको माथि सुतिरहनुभएको छ । तपाईले आफ्नो वजन पार्टनर माथि राख्नु भएको छ भने दिमागमा नकारात्मक असर आउँछ । यसमा दुबै जना सावधान रहनु पर्छ। केटी नै भएपनि म हल्का छु भनेर सबै शरीर बोकाउनुभयो भने त्यो गलत हुन् सक्छ । सास फेर्न तिनीहरूको क्षमतामा बा धा पुर्‍याउनुले जे भए पनि पल र केही राम्रो कार्यको सम्भावनालाई मा’र्नेछ। यसैले यस्तो काम रोक्नु पर्छ ।
५, धेरै चाँडै क्ला’इमे’क्सिङ वा धेरै ढिलो
यो विशेष गरी पुरुषहरूको लागि हो। तपाईंले उपयुक्त समयमा स्ख’ल’न गर्न सक्नुहुन्छ भनी सुनिश्चित गर्न तपाईंको मांसपेशीहरूमा राम्रो नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ। धेरै चाँडै वा अति नै ढिला हुनु राम्रो मानिदैन । यसले तपाईं आफ्नो पार्टनरलाई असन्तुष्ट छोड्नुहुन्छ ।
धेरै ढिलो भयो भनेपनि तपाइँको पार्टनरलाई जिममा फलाम पम्प गरिरहेको जस्तो महसुस हुसक्छ। यसबाट बच्नको लागि, फोरप्लेमा धेरै समय खर्च गर्नुहोस् । यदि तपाइँ धेरै समय लिनुहुन्छ र म्यानुअल मार्फत मात्र स्ख’लन ग’र्न सक्नुहुन्छ भने, तपाइँको पार्टनरलाई च’रम उ’त्ते’जि’त गराउन सक्दो प्रयास गर्नुहोस् र त्यसपछि उनीहरूले तपाईलाई अनुग्रह फर्काउन सक्छन्। त्यसपछि मात्र स्ख’लि’त हु’ने गर्नुहोस् ।
यो पनि, झण्डै पाँच किलोमिटरको दूरीको सडक खण्डमा बसमा यात्रा गरिरहेका एक यात्रुसँग सहचालकले रु चालिस भाडा मागेपछि उहाँ गन्तव्यमा नपुग्दैबीच बाटोमै उत्रिनुभयो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको महेन्द्रनगरदेखि अत्तरिया सडक खण्डमा मङ्गलवार चलेको ना ४ ख ६१७५ नम्बरको उक्त बसका सहचालकले गुलरिया बजारवाट झण्डै पाँच किलोमिटरको दूरीमा रहेको अत्तरिया चोकसम्म तोकिएको भन्दा बढी चालिस रुपैया भाडा मागेपछि आफू बीच बाटेमै झर्न वाध्य हुनुपरेको पीडित यात्रुले गुनासो गर्नुभयो ।
“पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै बस व्यवसायीले पछिल्ला दिनमा आफूखुशी भाडा लिइरहँदा पनि यात्रुलाई परेको मर्का बारे सोचिदिने कोही छैन,” बाटोमै अलपत्र अवस्थाम भेटिनुभएका यात्रु महेश खत्रीले भन्नुभयो, “गुलरियादेखि अत्तरिया चोकसम्म बसमा हालसम्म रु २० भाडा लाग्ने गरेकोमा सहजकर्ताले आफूसँग डबल भाडा मागेपछि भाडा दिन नसकी गन्तव्यमा पुग्न नपाउँदै झर्न वाध्य भए ।” गुलरिया चोकमा रोकिएको सो बसका चालक र सहजकर्ताले धनगढी जाने भन्दै आफूलाई बसमा चढ्न दिएपनि यात्राका क्रममा बस अत्तरियासम्म मात्र जाने भनेर ठगिरहेको र भाडा पनि तोकिएभन्दा बढी मागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गुलरिया चोकदेखि दुई किलोमिटर पूर्वतर्फ पर्ने गज्रौला चोकमा बसवाट झर्दा आफूवाट सहजकर्ताले खुद्रा पैंसा नभएको बहनामा भाडा वाफत् रु दश लिनुपर्नेमा रु बीस लिने प्रयास गरेको गुनासो पनि उहाँले गर्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको बहानामा खास गरी छोटो दूरीमा चल्ने बस लगाएतका सवारी साधनले पछिल्ला दिनमा मनोमानी ढङ्गले भाडा लिन थालेपछि समस्या झेल्नुपरेको यात्रुले बताएका छन् ।
छोटो दूरीमा चल्ने कतिपय सवारी साधनले भाडा लिइसकेपछि यात्रुलाई टिकट उपलब्ध नगराउँदा सम्बन्धित निकायमा उजुरीसमेत गर्न कठिनाई भइरहेको पीडित यात्रुको अनुभव छ । छोटो दूरीमा चल्ने बसका कतिपय यात्रुमा तोकिएको भाडा दिएर पनि टिकट माग्ने बानी नभएको र बसका सहजकर्तामा पनि यात्रुले मागेको टिकट नदिने प्रवृत्ति रहेको कारण पनि यात्रुले बेलाबखत सास्ती खेप्नु परेको बताइन्छ ।
“भाडा दिएपछि यात्रुले टिकट माग्दा सहजकर्ताले छैन भन्ने जवाफ दिन्छन्,” धनगढीमा भेटिनु भएका बसका यात्री नेत्रराज जोशीले भन्नुभयो, “भाडा लिने सवालमा यातायात व्यवसायीको मनोमानी बढ्दा यात्रुमा परेको मर्काप्रति कोही जिम्मेवार देखिँदैन ।” महाकाली यातायात ब्यावसायी समितिका अध्यक्ष डम्मर पन्तले भने आफूखुशी भाडा लिएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको दावी गर्दै सरकारले तोकेको भाडादरभन्दा बढी भाडा यात्रुवाट लिन नपाइने बताउनुभयो ।
“तोकिएभन्दा बढी भाडा माग्ने माथि कारवाही गर्न नजिकको प्रहरी कार्यालय र यातायात कार्यालयमा उजुरी गरे सम्बन्धित माथि ठगि मुद्दा लगाउन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कति भाडा दिनुपर्छ भन्ने बारेमा यात्रुलाई पनि जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ ।” पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै सरकारले हालै सार्बजनिक सवारीका साधनको साविकको भाडा दरमा ११ प्रतिशतकाले वृद्धि गरेको उहाँले बताउनुभयो ।